မက်ဒရစ်မှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာ 10 | ခရီးသွားသတင်း
ခရီးသွားသတင်း | | မက်ဒရစ်
မက်ဒရစ်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ရှည်လျားသောရာသီဥတုရှိရန်စပိန်နိုင်ငံမြို့တော်သည်မြို့တော်ကိုနက်နက်နဲနဲသိရန်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လမ်းခင်းခြင်းများအတွက်အရက်ဆိုင်များ၊ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများနှင့်လမ်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်မြို့တော်ကိုသိကျွမ်းရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် Guruwalk နှင့်အတူမက်ဒရစ်တွင်အခမဲ့ခရီးစဉ်. နောက်ပြီး၊ မက်ဒရစ်မှာလုပ်ဖို့ထိပ်တန်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ 10, အတွင်းဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးမြို့ကြီးများထဲကတစ်ခု Espana.
2 Retiro ပန်းခြံ
3 အယ်လ် Rastro
8 La Latina ၏ Terraces
9 Chueca ရဲ့ကော့တေးဘား
10 The Gran Vía
El Paseo del Arte သည်တစ်ကီလိုမီတာအရှည်ရှိသည် Prado ပြတိုက်၊ Thyssen-Bornemisza ပြတိုက်နှင့် Reina Sofíaပြတိုက်တို့တည်ရှိရာ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုသင်ကြည့်ရှုလိုပါက Paseo del Arte Card ကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ 2019 သည်ယခုနှစ်နှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပသော Prado ပြတိုက်သို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ရန်အထူးနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ အခြားပြတိုက်များလည်းရှိသည် ဖယောင်းပြတိုက် သို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သောရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်။
Retiro Park ကိုမသွားဘူးဆိုရင်မက်ဒရစ်ကိုမင်းသိပြီလို့မင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ မြို့၏အစိမ်းရောင်အဆုတ်ကိုစဉ်းစားRetiro Park သည် ၁၁၈ ဟက်တာရှိပြီးသင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်၊ လှေစီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပျော်ပွဲစားရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဥယျာဉ်များအနက်အဓိကမီးမောင်းထိုးပြမှုများမှာ Vivaces ဥယျာဉ်၊ Cecilio Rodríguezဥယျာဉ်များနှင့် Rosaleda တို့ဖြစ်သည်။ Retiro ပန်းခြံတွင် Palacio de Cristal ဟုလူသိများသည့်နေရာလည်းရှိသည်။ ၎င်းကိုယနေ့ပြပွဲခန်းမအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အယ်လ်ရာစထရိုသည်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ခင်းများနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ရှိသောကြောင့်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းတွင်သင်သုံးထားသည့်အဝတ်၊ စာအုပ်နှင့်ပရိဘောဂများမှစစ်မှန်သောစုဆောင်းသူ၏ပစ္စည်းများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ Lavapiésရပ်ကွက်ရှိ Ribera de Curtidores ဆင်ခြေလျှောတွင် Rastro စျေးကိုမက်ဒရစ်ပြည်သူလူထု၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
သငျသညျဘောလုံး၏ကြီးမားသောပရိသတ်ကိုမဟုတ်လျှင်ပင်, ကသွားရောက်ကြည့်ရှုရကျိုးနပ်သည် စန်တီယာဂို Bernabeu အားကစားကွင်း။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်လူ ၈၀,၀၀၀ ကျော်၏စွမ်းရည်ရှိသည်။ ထိုနေရာတွင်သင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့်သမ္မတ box၊ ကစားကွင်းသို့မဟုတ်ကစားသမားပြောင်းလဲသည့်အခန်းများကဲ့သို့သောနယ်ပယ်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ခရီးတစ်ခုကိုသင်သွားနိုင်သည်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သည်ဒီရာသီခရီးစဉ်တွင်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှရရှိသောဆုဖလားများကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်သည်.
တော်ဝင်နန်းတော်သည်အနောက်ဥရောပရှိအကြီးဆုံးနန်းတော်ဖြစ်ပြီးအခန်းပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်သည်စတုရန်းမီတာ ၁၃၅၀၀၀ ကျော်ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ ဒီနေ့နန်းတော်သည်နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားများ၏ဖျော်ဖြေမှုအတွက်သီးသန့်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုလည်းလည်ပတ်နိုင်သည်။ တော်ဝင်နန်းတော်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်မက်ဒရစ်မြို့ရှိနေဝင်ဆည်းဆာခံစားရန်အကောင်းဆုံးစံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိသုကာပုံစံအရနန်းတော်သည်အခြားသူများနှင့်၎င်း၏ Baroque ပုံစံနှင့်ကွဲပြားသည်။
ဒေဗော်ဗိမာန်သည်နေဝင်ချိန်နှင့်ကြယ်တစ်လုံးတည်းသောညတွင်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Parque del Cuartel de la Montañaတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းအီဂျစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဆည်ဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်မသွားစေရန်ထိုနိုင်ငံအစိုးရမှစပိန်သို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။။ အဆောက်အ ဦး ၏အတွင်းပိုင်းတွင်သမိုင်းနှင့်အခြားဗိသုကာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသောရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Puerta del Sol သည်မြို့၏အထိမ်းအမှတ်ဗဟိုဌာနဖြစ်ပြီးမြစ်ဆုံနှင့်လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြမှုများစွာပြုလုပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မြို့၏အထင်ရှားဆုံးသောပုံများဖြစ်သော Casa de Correos နာရီ၊ Kilometer Zero plaque နှင့် Bear ၏ရုပ်ထုနှင့်စတော်ဘယ်ရီပင်တို့လည်းပါ ၀ င်သည်။.
La Latina ၏ Terraces
La Latina အနီးရှိလှေကားထစ်များသည်မက်ဒရစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်းမြို့တော်သို့သွားသောခရီးတွင်အနည်းငယ်စျေးကြီးသောအဆောက်အအုံကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများ၊ menu အမျိုးမျိုးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတ်မှတ်ထားသောစစ်မှန်သောဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ထိုက်တန်သည်။
Chueca သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အများဆုံးမက်ဒရစ်ရပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့အရက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်များအပြည့်နှင့်, ရပ်ကွက်အတွင်းဥရောပသုံးခုအကောင်းဆုံးဘားအဖြစ်သုံးကြိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော Bar Chicote ကဲ့သို့သောထူးချွန်တည်ထောင်အချို့, ရှိပါတယ်။။ သို့သော် Chueca တွင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကဖေးများမှနိုက်ကလပ်များသို့သွားသောနေရာများစွာရှိသည်။ အခန်းထဲတွင် Libertad 8 အခန်းသည်ထူးခြားနေပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာ Teatro Barceló TClub ဟုသိကြသည်။
Gran Víaလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်မက်ဒရစ်တွင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်သည်။ စတိုးဆိုင်များနှင့်လှပသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသော Gran Víaသည်မြို့၏အဓိကလမ်းများနှင့်စပိန်မြို့တော်၏အကျော်ကြားဆုံးလမ်းဖြစ်သည်။။ Gran Víaတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်သွားသောအခါအထိမ်းအမှတ် Metropolis အဆောက်အအုံ၊ Telefónicaအဆောက်အအုံ၊ Palacio de la Prensa၊ Rialto ပြဇာတ်ရုံ၊ Plaza de Callao နှင့်España Building တို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။
သေချာတာပေါ့အခြားသူတွေရှိပါတယ် မက်ဒရစ်အတွက်မရှိမဖြစ်သောနေရာများ ၏ဤစာရင်းဖြည့်ရန် 'ဘာကြည့်ရမလဲ'ဤအချက် (၁၀) ချက်သည်စပိန်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့်သမိုင်းကိုသင်စတင်သိရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » မက်ဒရစ် » မက်ဒရစ်မှာလုပ်ဖို့ထိပ်တန်းအရာ 10